क्रसर व्यवसायीसँग मिलेर नियम विपरित चल्छन् वडा अध्यक्षका डोजरहरु ! « News24 : Premium News Channel
क्रसर व्यवसायीसँग मिलेर नियम विपरित चल्छन् वडा अध्यक्षका डोजरहरु !
पोखरा । पोखरा महानगरपालिका १४ स्थित बाच्छेबुडुवामा रहेको अबैध क्रसरले वडा अध्यक्षकै संमरक्षणमा क्रसरजन्य वस्तुको दोहन गरेको पाइएको छ । महानगरले सार्वजनिक कृषी योग्य जमिन सम्याउने र निस्किएको कंक्रिट पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई दिने गरी २०७४ चैत्र ३० सम्म मात्रै अनुमति दिएको थियो ।
तर २०७५ माघ सुरु हुँदा सम्म पनि उत्खनन रोकिएको छैनन् । सँगै रहेको व्यक्तिगत जग्गा देखाएर सार्वजनिक जग्गा र सेतीखोला सँगै जोेडेर नदिजन्य वस्तु तस्करी भएको छ । वातावरण प्रभाव मुल्याङकन (इआए) रिपोर्ट नआउँदासम्म उत्खनन् गर्न नपाइने भएपनि यहाँ उत्खनन् भइरहेको छ । क्रसर संचालक रोमबहादुर कार्कीले गौरवको आयोजना भएको बहाना देखाउँदै रिपोर्ट नआएको तथा क्रसर मापदण्ड अनुसार नभएको स्वीकार गर्छन् ।
कोन टेक प्रा.लि.ले पोखरा बिमानस्थलका लागि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने अनुमति पाएको छ । सोही कम्पनिसँग मिलेर अबैध रुपमा क्रसर संचालन गर्दै आएका ठेकेदारहरुले वडा कार्यालयसँग दाहा संस्कार स्थल तथा ट्रस निमार्ण गर्ने, नदिजन्य वस्तु उठाउन नपाईने, सोलार पलान्ट जडान गर्ने, तारजाली भर्ने लगाएतका सम्झौता गरेको थियो ।
त्यही कोन टेक प्रा.लि.का तर्फबाट रोमबहादर कार्कीको टोलीले सामान उपलब्ध गराइरहेको छ । तर सर्तको पालना न कोन टेक प्रालीले पुरा गरेको छ, न कम्पनीसँग सहकार्य गरेका रोमबहादुर कार्कीको टोलीले । क्रसरको प्लान्ट सार्वजनिक जग्गामा राखिएको छ भने सार्वजनिक जग्गा तथा खोलाबाट उत्खनन् गरिएको छ ।
तर पनि पोखरा महागनरपालिका १४ का वडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर कार्कीले अवैध काम नभएको दाबी गर्छन् । साथै क्रसर निजी जग्गामा सञ्चालन भएको सार्वजनिक जग्गा नछोएको बताउँछन् ।
तर उनले अवैध नभएको भन्नुको पछिको रहस्य भने अर्कै छ । वडा अध्यक्षकै अनुसार उनको डोजर र अन्य सामान्य क्रसरमै प्रयोग भएका छन् ।
क्रसर संचालक र वडा अध्यक्षकै मिलेमतो भएपछि कानुन संम्वत भएको नभएको हेर्ने कसले । आँफ्नै डोजर क्रसरमा प्रयोग गरेको वडा अध्यक्षले क्रसरलाई दिएको वैधानिकताको बिषयमा के महानगरपालिकाले छानबिन गर्नु पर्दैन भन्ने सरोकारवालाको प्रश्न छ ।